घट्यो सुनको मूल्य, हेर्नुहोस् तोलाको कति पुग्यो ? – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/घट्यो सुनको मूल्य, हेर्नुहोस् तोलाको कति पुग्यो ?
काठमाडौं – मंगलबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य एक सय रुपैयाले घटेको छ । सोमबार प्रतितोला ७६ हजार रुपैयामा कारोबार भएको छापावाला सुनको मूल्य आज एक सय रुपैयाले घटेर प्रतितोला ७५ हजार ९ सय रुपैयामा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
त्यस्तै आज तेजावी सुनको मूल्य प्रतितोला ७५ हजार ६ सय रुपैयामा कारोबार भइरहेको जनाइएको छ । त्यसैगरी आज चाँदीको मूल्य भने स्थीर रहेको छ। आज चाँदीको मूल्य प्रतितोला ८ सय ८० रुपैयामा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
हेर्नुहोस् मंगलबारको विदेशी मुद्राको विनिमयदर
मंगलबार अमेरिकी डलरसहित धेरैजसो सबै देशको भाउ घटेको छ । आज नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमयदर अनुसार एक अमेरिकी डलरको खरिददर १ सय १३ रुपैयाँ ७६ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १ सय १४ रुपैयाँ ३६ पैसा तोकिएको छ । त्यसैगरी एक कतारी रियालको खरिददर ३१ रुपैयाँ २५ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ ४१ पैसा तोकिएको छ ।आज एक युएई दिरामको खरिददर ३० रुपैयाँ ९७ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ १४ पैसा तोकिएको छ ।
एक युके पाउण्ड स्ट्रलिङको खरिददर १ सय ४७ रुपैयाँ ११ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १ सय ४७ पैयाँ ८८ पैसा तोकिएको छ। त्यस्तै एक कुवेती दिनारको खरिददर ३ सय ७३ रुपैयाँ ५५ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३ सय ७५ रुपैयाँ ५२ पैसा तोकिएको छ ।त्यस्तै कोरियन वन एक सयको खरिददर ९ रुपैयाँ ५८ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ६३ पैसा तोकिएको छ । आज एक बहराईन दिनारको खरिददर ३ सय १ रुपैयाँ ७२ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३ सय ३ रुपैयाँ ३१ पैसा तोकिएको छ ।
त्यस्तै एक मलेसियन रिँगिटको खरिददर २७ रुपैयाँ ४३ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर २७ रुपैयाँ ५७ पैसा तोकिएको छ । त्यसैगरी एक अष्ट्रेलियन डलरको खरिददर ७६ रुपैयाँ १४ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ७६ रुपैयाँ ५४ पैसा तोकिएको छ । त्यसैगरी एक साउदी रियालको खरिददर ३० रुपैयाँ ३३ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ४९ पैसा तोकिएको छ ।
कालिकोटमा कोरोना संक्रमितिको संख्या ७८ पुग्यो
नेपाल आर्मीमा रहेका यि बाबुले आफ्ना ३ छोरीलाई यस्तो अत्याचार गरेपछि छोरीहरुले यसरी पोखे दुखेसो